Usoro Usoro - WRSP
CHBỌROC IME LINEBỌCHLINE
1931: Onye guzobere Mary Ann Maclean mụrụ na Glasgow, UK
1935 (October 8): Onye guzobere Robert Moore mụrụ na Shanghai, China.
1936: Moore soro nne ya laghachi England.
1960s: Moore na Maclean zutere site na Scientology wee lụọ na-ewere aha de Grimston.
1963: The de Grimstons hapụrụ Scientology ịchọta Compulsions Analysis na London, England.
1965-1966: Nnyocha mmanye dọtara ndị ahịa na de Grimstons gbanwere aha otu ahụ na Usoro.
1966 (June 23): Usoro ahụ hapụrụ London maka Nassau, Bahamas tupu ha edozi na Xtul, Yucatan Peninsula.
1966 (October 7): Usoro a diri Hurricane Inez, na-ele ya anya dị ka ahụmịhe okpukpe ma na-eduga nhiwe nke Usoro ahụ dị ka Usoro Nzukọ nke Ikpe Ikpe Ikpe.
1966-1968: Usoro ahụ laghachiri na London ma debe isi na San Francisco, New Orleans, New York, Rome, Paris, Amsterdam, Hamburg, na Munich.
1970: Usoro ahụ biri na United States na de Grimstons kewapụrụ onwe ha na otu na-enye onwe ha aha "The Omega"; n'ime Usoro a na-akpọ Robert "Onye Ozizi" na Mary Ann "Ebube."
1974 (March 23): Robert de Grimstonwas wepụrụ ya na Usoro site na Kansụl Nna-ukwu wee hapụ United States.
1974: Mary Ann de Grimston na Kansụl guzobere Okwukwe Okpukpe nke Millennium ọhụrụ ahụ, nke e mesịrị kpọọ aha dị ka okwukwe nke okwukwe nke Chineke.
1979: Emegharịrị usoro ahụ n'okpuru nduzi ọhụrụ
1987: Usoro a gbasaa na isi ndị metụtara inyere ndị na-enweghị ebe obibi aka; e mechara mara isiakwụkwọ ndị a dị ka Society of Processeans.
1993: Ekwuputara okwukwe na nkuzi nke usoro ikpe nke ikpe ikpe na-enweghị isi, e bibiri ebe nchekwa, chọọchị ahụ gbasasịa n'agbanyeghị na Society of Processeans nọgidere na-adị dị ka nzukọ ọrụ obodo.
Robert Moore na Mary Anne Maclean biri ndụ abụọ dị iche iche ruo mgbe ha zutere onwe ha na chọọchị Scientology. A mụrụ Robert na Shanghai, China na October 8, 1935; ma tupu ya eruo otu afọ ya na nne ya laghachiri England. N'ebe ahụ nzụlite ya ka ọ na-akọwa ya, na William Bainbridges's Ike Setan, "bụ asụsụ Bekee toro eto, nwee obi ụtọ na enweghị atụ" (Bainbridge 1978: 21). Ọ gụrụ agụmakwụkwọ nke onwe nke Onye Kraịst mana sonyeere ndị agha Britain karịa ịga ụlọ akwụkwọ dị elu. Mgbe agha gachara, ọ nọrọ ọtụtụ afọ na ọzụzụ ụkpụrụ ụlọ.
Oge Mary Anne dị iche. Nne ya rụrụ ọrụ dị obere na nzụlite ya na-ahapụkarị ya na ndị ikwu ndị ọzọ. Ọ gụbeghị akwụkwọ ọfụma ma yie ka ọ nweghị mkpebi mkpebi siri ike na ndụ ya ruo mgbe ya na Scientology na Robert sonye. William Bainbridge na-egosi na akwụkwọ ya na ọ bụ ndịiche ndị a na ụdị ndụ Robert, Mary Anne, nka, na mkpa ha mere ha jiri nwee mmekọrịta dị mma (Bainbridge 1978: 23-26).
Ha abụọ zutere ma nwee ịhụnanya na mbido 1960 mgbe ha abụọ bụ ndị otu ụka nke Scientology. Ma Robert ma Mary Anne họọrọ idebanye aha na nkuzi nke na-azụ mmadụ ịbụ onye nkuzi Scientology. Nke a metụtara ha na nnọkọ ọgwụgwọ siri ike n'etiti onwe ha. Ọ bụ n'oge nnọkọ ndị a ka Robert na Mary Anne ghọtara na ha nwere mmasị na ọrụ nke ọkà mmụta banyere akparamàgwà mmadụ Alfred Adler na echiche ọjọọ ha banyere Scientology. Ha malitere ịhụ ibe ha n'anya. Mgbe ha lụrụ, Robert na Mary Anne gbanwere aha ha ịbụ Grimston.
In Ike Setan Robert na-akọwa echiche Adler “n'ihe gbasara ebumnuche ndị na-amanye mmadụ n'ike nke pụtara na ọ chere na onye ọ bụla na-achụso ihe, ọ naghị ekwu maka ebumnuche na ebumnuche anyị niile nwere, mana ikike amaghị ihe na-akpali omume anyị n'ezie. Ma mụ ma Mary Mary] anyị kwekọrịtara. Anyị kwenyekwara na Adler na iwebata ihe mgbaru ọsọ ndị a na-amaghị ihe nwere ike belata esemokwu, nrụgide, esemokwu, nsogbu, na echiche nke ọdịda nke mmadụ ọ bụla nọ n'okpuru ya "(Bainbridge 1978: 27).
Di na nwunye ahụ nwere ndakpọ olileanya na onye ndu Scientology na nkuzi ya na iwu ya. Ha chere na usoro ha mụtara site na usoro ahụ dị mfe ma dịkwa irè n'ịchọpụta ebumnuche amaghị ama nke Adler. Na 1963 Robert na Mary Anne hapụrụ Scientology wee mepụta Compulsions Analysis na London, otu usoro ọgwụgwọ nke a pụkwara ịkpọ nke òtù nzuzo ndị ahịa. Robert kọwara ìgwè ahụ na 1965; “Ebumnuche anyị bụ ime ka ndị mmadụ mara banyere onwe ha, wee buru ọrụ nke ọma banyere onwe ha na ndị ọzọ. Anyị anaghị echegbu onwe anyị banyere ịgwọ ndị ọrịa ọgụgụ isi dịka ndị na-ahụ maka ọdịnala ọdịnala. Anyị chọrọ inyere ndị mmadụ aka imezu onwe ha ”(Bainbridge 1978: 33).
Mkparịta ụka mmanye malitere ngwa ngwa iji dọta ndị ahịa site na netwọ enyi na ọ bụ ndị ahụ banyere ọgwụgwọ na afọ abụọ na ọkara mbụ kpụrụ isi nke Usoro ahụ, nke ha gbanwere aha otu ahụ, emesịa. Ndị ahịa a sonyere na usoro ọgwụgwọ n'otu n'otu na Robert na Mary Anne na otu nnọkọ nke mere e jiri nwee njikọ ngwa ngwa n'etiti ha niile. Ya mere, njikọ nke onye so na ya na ndị na-abụghị ndị otu ahụ belatara na-akpata enweghị ntụkwasị obi n'etiti obodo. Nsonaazụ nke a bụ ihe a na-ezo aka na mbugharị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. "Na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụkụ nke netwọkụ mmekọrịta gbatịrị agbada ka mmekọrịta mmekọrịta dị n'ime ya na-ewusi ike ma, na nkwekọ, ndị na-abụghị ndị na-esighi ike ya na-ada mbà" (Bainbridge 1978: 52).
William Sims Bainbridge rụtụrụ aka na ihe na-ebute echiche a bụ mmekọrịta chiri anya nke malitere site na usoro ọgwụgwọ. Otu a rapuru onwe ha kpam kpam na usoro ogwu ahu, ya mere ha na ndi ozo n’agha gharazi igu. Eziokwu a kwụsịrị mbanye nke ndị ọhụrụ site na netwọk mmekọrịta ma rụpụta ndabara nke mmekọrịta (Bainbridge 1978: 52).
Bainbridge na-atụkwa aro na Robert na Mary Anne azaghị ndị otu ndị ọzọ ka ha bụrụ ndị na-agwọ ọrịa ọsọ ọsọ nke na ha ga-ewere usoro ọgwụgwọ niile na-egbochi oke ndị otu. Ọ na-atụ aro na ọ bụrụ na ha zụrụ ndị na-agwọ ọrịa "ọdịbendị ọhụrụ a nwere ike gbasaa ebe niile na obodo Bekee karịa ịkọwapụta" (Bainbridge 1978: 52).
Otu ahụ kewapụrụ onwe ya na ndị ọzọ nọ n'obodo ma yabụ na ha anaghịzi ejide onwe ha n'omume a nabatara gbasara usoro mmekọrịta ọha mmadụ ahụ. Nke a pụtara na "… ha nweere onwe ha ịhapụ ịhapụ nkwenkwe na omume na-emepe emepe" (Bainbridge 1997: 248). Ya mere, otu a nweere onwe ya ịmalite ịkwado echiche okpukpe ma o mere. Ihe ndị a niile so mee mkpebi mkpebi ahụ ịhapụ London gawa Bahamas na June 23, 1966.
Ndị otu ahụ anọgideghị na Nassau, ma n'ikpeazụ, ha na-agbakọta n'otu nchikota nke ụlọ ndị e bibie ebibi na Xtul (ngwá ọrụ sh) na Yucatan Mexico. Ndị Processean na-arụ ọrụ banyere ịrụzi ụlọ ahụ ma na-eto akwụkwọ nri ha. Ha malitekwara itinye aka na ihe omume okpukpe dị iche iche, dị ka ikpe ekpere, ibu ọnụ, na ntụgharị uche. Ọ bụ na Xtul na ìgwè ahụ malitekwara ịmepụta aha ọhụrụ, ebe a ka a họọrọ ha, ma na afọ ndị ọzọ Mary Anne ma ọ bụ ndị ndú ndị ọzọ nyere ha ọrụ.
Ihe kachasị mkpa mere mgbe ndị Processeans nọ na Xtul bụ nlanarị nke Hurricane Inez nke mere maka ụbọchị abụọ. Ndị otu ahụ kwenyere na nlanarị ha abughi naanị ihe ndabara kama na ha ezutewo akụkụ ọma na nke ọjọọ nke Chineke nke Nature, echiche nke na-eduga na nkwenkwe ha mechara banyere chi. Otu onye otu ekwuru na ike Setan kwuru, “Xtul bụ ebe anyị zutere Chineke ihu na ihu. Ọ bụ ahụmịhe nke dugara na nguzobe nke Nzukọ-nsọ. N'ihe banyere itinye onwe anyị n'ọrụ, ọ bụ isi nloghachi ebe onye ọ bụla n'ime anyị, bụ onye akara aka kpụpụtara site na ụwa ọrụ, chọpụtara na anyị nwere ọrụ Chukwu "(Bainbridge 1978: 68). Nsogbu metụtara nne na nna nke ndị otu atọ manyere ndị Processeans ịlaghachi England.
Ya mere, Usoro ahụ laghachiri na Balfour Place na London okpukpe karịa òtù ọgwụ. Ndị òtù ahụ malitere ịmalite ọrụ nke ụka nke ịchọta na inye onyinye (ịrịọ ego). Afọ ole na ole sochirinụ bụ oge uto maka Usoro ahụ. Ìgwè ahụ guzobere isi na San Francisco, New Orleans, New York, Rome, Paris, Amsterdam, Hamburg, na Munich.
Na 1968 n'ihi nsogbu ego Robert de Grimston nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha pụọ ​​n'ụwa, ọkachasị na Germany, abụọ abụọ na-enweghị ego ma ọ bụ ihe ọ bụla iji gbasaa Okwu ahụ ma rịọ ego. Robert kwadoro akwụkwọ nsọ site na Matthew Ten, 1.1. Na Matiu Isi 10, Kraịst na-enye ndị na-eso ụzọ ya ndụmọdụ, tupu ha ezipụ ha abụọ abụọ ka ha gaa site n’obodo ruo n’obodo na-ekwusa Okwu ahụ. Ntụziaka o nyere dị ugbu a, ọ ga-abụrịrị karịa karịa otu ọ dị n'oge ahụ. 1.2 Anarala ego. Maka onye [Processean] enweghị mkpa maka ya n'onwe ya. N'ihi na mkpa anụ ahụ anyị ga-ezute ndị anyị na-enyefe n'ụzọ ime mmụọ… ”(Bainbridge 6.3: 1978) ma ya mere ana-akpọ ya Mathew Ten phase.
Ndị otu ahụ mechara biri na United States na 1970 wee guzobe isi akwụkwọ na Boston, Chicago, New Orleans, na New York na nke na-enweghị isi na Toronto, Canada. Mgbe ahụmahụ dị na Xtul, Robert na Mary Anne kewapụrụ onwe ha na ndị ọzọ wee nye aha ha Omega. N'ime afọ niile otu otu na-aga nke ọma, ụzọ abụọ ahụ gara ma biri nke ọma na ego enwetara site na onyinye nke ndị ozi ahụ mere.
N'ihe dị ka afọ 1970 ka Omega bidoro nwewe nsogbu nke dị n'ime obodo ma nsogbu ndị a na - eduga na nkewa otu. Robert De Grimston gbalịrị itinye ihe ọ kpọrọ New Game nke bụ ụdị nnwere onwe mmekọahụ n'ime otu ahụ. Achọpụtakwala na "enweghị afọ ojuju na mmesiwanye ike na Setan" n'etiti ndị otu (Melton 1996: 229). Omume ya na omume ya gbasara otu a kpatara esemokwu n'etiti ya na Mary Anne kamakwa ya na Kansụl nke Nna-ukwu, ndị na-achị achị.
Nsogbu ego na nke mmụta okpukpe na-ebute mmụba na esemokwu a na ihe niile kpatara na Kansụl Nna-ukwu wepụrụ Robert De Grimston n'ọfịs Onye Ozizi Ike na Machị 23, 1974. Mgbe ahụ ọ hapụrụ United States na enweghị ike ịmegharịghachi ọnọdụ ya ma ọ bụ na-eso ya. Mary Anne na Kansụl Nna-ukwu gbanwere ụfọdụ nkuzi na omume ike wee wee guzobe Foundation Faith nke Millennium Ọhụrụ ma ọ bụ okwukwe nke Chineke ugbu a (Bainbridge 1978: 227-30).
Enwere mgbalị na-aga nke ọma iji melite Usoro ahụ n'okpuru nduzi ọhụrụ na 1979 na na 1987 a na-agbawanye ọganihu. Isi ndị a dabeere na inyere ndị na-enweghị ebe obibi aka. A bịara mara ìgwè a dịka Society nke Processeans na ọ bụ otu nzukọ ụwa. E kwuputara okwukwe na ozizi nke Usoro ahụ, emebisịla ihe ndekọ ụlọ akwụkwọ ahụ, a kpochapụrụ Chọọchị na 1993. Ndi otu Society nke Processeans na-aga n'iru taa dika ndi otu ndi oru obodo (Church of the Final Judgment).
Usoro ahụ dị nsọ bụ Akwụkwọ Nsọ, ọkachasị Akwụkwọ Matiu na Agba Ọhụrụ. Ndị otu a jiri ọtụtụ akwụkwọ edemede Robert de Grimston na ọrụ ndị isi ụka ndị ọzọ dịka akụkụ Akwụkwọ Nsọ; ndị a gụnyere "Xtul Dialogues", "Ọpụpụ", "Dị Ka Ọ Dị", "N'ihi na Kraịst Abịawo", na "Tide nke Ọgwụgwụ" nke bụ usoro nke Akwụkwọ Mkpughe. Examplesfọdụ ihe atụ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị Usoro ahụ nwere ike ịchọta na ịntanetị bụ "kandụl na hel", "Setan na agha", na "Mmadu bụ Ekwensu".
Enwere ike ikewa okwukwe nke usoro a n'oge abụọ dị iche. Nke mbụ n’ime oge ndị a lekwasịrị anya na Chineke dị ka onye kachasị dị elu ma bụrụ echiche mmalite ya wee bụrụ naanị ya ruo mgbe 1967. Oge nke abụọ batara mgbe de Grimson dere edemede ya bụ “Ndị Hierarchy” na 1967. Edemede a webatara nkwenye na Jehova, Lucifer, na Setan, Chineke ato ato nke eluigwe na ala (Bainbridge 1978: 176).
N'ime afọ ndị mbụ, Usoro ahụ weere na Chineke bụ onye kachasị elu nke enweghị oke (Chineke bụ). Ha kwenyere na itymụ mmadụ bụ ihe na-abụghị nke Chineke, "mmadụ bụ ọnyà nke igbochi ihe mgbochi, ebe Chineke enweghị njedebe" (Bainbridge 1978: 174). Ọbụna na akpọọ mmadụ dị ka Setan, onye iro kasịnụ nke Chineke. Nkwenkwe ha nke apọkalips lekwasịrị anya na mbibi nke akụkụ ndị a nke mmadụ na-enupụrụ Chineke isi. Ya mere, ebumnuche nke ọtụtụ ememme na ọgwụgwọ ha bụ ịgbanahụ mpaghara a nke enweghị olileanya nke mmadụ site na inyere Kraịst aka n'ọrụ nke ijikọ eluigwe na ala.
Ọchịchọ ndị a iji gbanahụ akara aka nke mmadụ na-eduga na aha otu. A na-akpọ emume dị iche iche na mmemme ọgwụgwọ nke ha were n'ọrụ "usoro". Ya mere, "ha kpebiri na ụlọ ọrụ ha dum bụ usoro mgbanwe gbanwere ma yabụ ha nakweere aha Usoro" (Bainbridge 1997: 250).
Ndị otu ahụ kwenyere, dị ka Ndị Kraịst, na Chineke zitere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa site n'ịhụnanya o nwere maka mmadụ. Ọrụ Kraịst bụ ịrụ ọrụ dị ka njikọ nkwukọrịta n'etiti chi na ụmụ mmadụ wee mezie chi atọ ahụ (Bainbridge 1997: 253). Kraist na Setan bu ndi ozo di otua ma nwekwaa uzo di iche iche nke megidere ha dika ihunanya na ujo na idi n’otu na nkewa. Nkwenkwe a na - eduga na de Grimston na eziokwu niile nwere ike “ịkọwa dị ka njikọta ụzọ abụọ nke polar opposites” nke ọ na - ekpughe n’akwụkwọ ya The World Pole Universe (Bainbridge 1978: 175).
Typesdị mmekọrịta ndị a na-apụta ìhè n'oge nke abụọ nke nkwenkwe nhazi nke na-elekwasị anya na chi atọ ahụ na Kraịst. Usoro nkuzi kwuru na e kere chi ndị a mgbe e kere eluigwe na ụwa na Chineke agbadala n'ime mmadụ anọ dị iche iche (The Gods). A kwenyere na chi ndị ahụ na-anọchite anya "ụkpụrụ atọ dị mkpa nke mmadụ na nke ọ bụla na-anọchi anya nsogbu bụ isi"; ma ọ bụ na ndị ọzọ okwu, "Chineke ọ bụla nwere ike hụrụ dị ka isi echiche na ụzọ kasị mma na-ebi" (Bainbridge 1978: 176).
Chi ọ bụla nọchiri anya ụfọdụ àgwà mmadụ. Jehova bụ "chi iwe nke ịbọ ọbọ na ịkwụ ụgwọ" onye chọrọ ịdọ aka ná ntị, obi ike, na ịrara onwe ya nye ọrụ na ịdị ọcha (The Gods). Lucifer, nke a na-akpọkwa Onye Na-enye Ìhè, nwere obi ụtọ na-ahụ n'anya ma nwee obiọma. O ji ihe ịga nke ọma na udo kpọrọ ihe. Setan mere ka ụmụazụ ya nwee àgwà abụọ dị nnọọ iche; nke mbụ bụ ọchịchọ ịrị elu karịa mpaghara mmadụ, ịhapụ onwe ya maka mkpa ya, na ịghọ "mkpụrụ obi niile na enweghị ahụ" (Bainbridge 1978: 177). Udi ozo bu ochicho iru ala mmadu ma tinye uche na ime ihe ike na otutu ihe ojoo. Kraist bu njikota nke chi na mmadu ma nye mmadu ikike nile ha choro iji merie nsogbu na nsogbu na ndu. Onye ọ bụla nwere chi nke ha na-akọrọ njirimara kachasị (Bainbridge 1978: 176-78).
Edobere chi ndị a ka ha bụrụ otu abụọ. Jehova na Lucifer bụ ndị mmegide na Kraịst na Setan bụ ndị na-emegide ya. E jikọtara ha na àgwà anọ bụ isi: Jehovian-Satanic, Jehovian-Christian, Luciferian-Satanic, na Luciferian-Christian. Ndị mmadụ n'èzí nwere ike ịchọpụta ọdịdị ụdị ha, ma ọ bụ ọdịdị nke Chineke, site n'ịza ajụjụ. Ọ bụ ezie na ndị òtù nke Usoro ahụ ga-eso ndị isi ha na ndị ọgbọ ha na-akpakọrịta, mgbe ahụ tụlee echiche ha, n'ikpeazụ mebiekwa ụkpụrụ nke Chineke. A na-ejikarị aha ndị a eme ihe n'etiti ndị òtù. Ka e mesịrị, e kenyere ụkpụrụ nke ọ bụla site na Robert de Grimston nke dị elu (nke ọma) na nke ala (na-adịghị mma).
Ndị otu a kwenyere na "Egwuregwu nke Chi" na-abịa na njedebe na ya na ụwa. Jehova na Lucifer ga-esonye n'otu mgbe njedebe nke ọgụ ha nke esemokwu nke uche. Akwụkwọ Nsọ na-agụ, “Site n’ịhụnanya, Kraịst na Setan emebila iro ha ma bịakọta ọnụ maka Ọgwụgwụ, Kraịst ikpe ikpe, Setan imezu ikpe ahụ…. Kraịst na Setan sonyeere, Nwa Atụrụ ahụ na Ewu ahụ, ịhụnanya dị ọcha sitere na elu elu nke Eluigwe, jikọtara ya na ezigbo atkpọasị nke e si na miri emi nke Hel pụta… Ọgwụgwụ dị ugbu a. Mbido Ọhụrụ ga-abịa ”(Bainbridge 1997: 245).
Ndị nke Usoro ahụ metụtara ememe dịgasị iche iche n'oge ha nọ n'ime otu. Ụfọdụ n'ime ememme ndị a na-emeghe ọha na eze ka e mere ọtụtụ ndị na nzuzo. Ọtụtụ ememe ndị yiri nke ndị a hụrụ na omume Ndị Kraịst, dịka alụmdi na nwunye, baptizim, na Mgbakọ Izu Ike. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ememme ndị na-adakwasị ìgwè ahụ.
Otutu di na nwunye di n'ime uka choro dika ihe kwesiri, obu ezie na enwere ufodu di na nwunye nke ndi nzuko kwadoro ka ha di iche. Dịka ọmụmaatụ, chọọchị ahụ mere alụmdi na nwunye nke otu nwoke na nwanyị di na nwunye. A kwenyere na ndị òtù nke mbụ nọ na chọọchị na-eme ya, n'ihi ya, ọ bụ ihe a na-emekarị maka ndị di na nwunye na-ekewapụ, ebe ọ bụ na a ga-eziga ha n'otu ebe dị iche na obodo ọzọ (Bainbridge 1978: 162).
Baptizim bụ emume nke soro otu onye otu na-aga na ọnọdụ ọzọ gaa na nke ọzọ. Ha mere na nzọụkwụ ọ bụla n'okporo ụzọ ndị isi. Ememe ndị a n'ozuzu ha, belụsọ mgbe Acolyte ghọrọ onye Initiate. Dị ka ọtụtụ n'ememe. Ejiri chants. Na baptism, Chants bụ Hymn of Initiation ma sachapụ anyị na mmiri nke ndụ. E nyere onye ahụ baptizim akara ngosi nke na-anọchite anya ịkwaga na ọkwa dị elu. Dịka ọmụmaatụ, enyere onye ahụ na-ebugharị na mbido gaa ozi na Mendes Goat baajị nke nọchitere anya Setan, na afọ ndị sochirinụ a gbanwere ka ọ bụrụ obe ọla ọcha na agwọ uhie na ya (Bainbridge 1997: 256).
A na-eme Mgbakọ izu ike kwa izu na Satọdee ma bụrụ oge ndị otu niile nwere ike ịgbakọta. Emere na ime emume alpha nke ahaziri n'ụdị ejiji. E nwere otu ebe ịchụàjà gbara okirikiri dị n’ime ime ụlọ ahụ nke nwere ihe nkwụnye n’akụkụ ya abụọ, otu na-ebu efere mmiri n’elu ya, nke ọzọ ejirikwa efere ọkụ. Ndị ahụ sonyere nọdụrụ ala gburugburu gburugburu ebe ịchụàjà na cushs dị n'ala, ndị nchụàjà abụọ ahụ nọdụrụ n'akụkụ n'akụkụ nke ụlọ ahụ na-eche onwe ha ihu n'oche. A na-akpọ ndị ụkọchukwu abụọ ahụ Sacrifist na Evangelist. Onye na-achụ àjà ahụ na-ese onyinyo Kraịst na onye nkwusa ozioma na-anọchite Setan. Onye na-achụ aja n’achụmmadụ na-achịkwa ọtụtụ emume ahụ mgbe Evangelist na-ekwupụta mmụọ okwu mmụọ. Ememe ahụ gụnyere Assemblybọchị Mgbakọ Sabbathbọchị Izu Ike. Ọtụtụ ihe nnọchianya na Sabbathbọchị Izu Ike na-eche banyere isi nkwenkwe nke nkwenkwe usoro, nke "mmekọrịta abụọ nke chi na ịdị n'otu nke Kraịst na Setan" (Bainbridge 1978: 190-94).
Usoro ya jiri usoro ọgwụgwọ wee gwọọ “ịgwọ mkpụrụ obi ha.” Usoro ọgwụgwọ mbụ bụ Telepathy Developing Circle. TDC, dịka ndị otu na-ekwu maka ya, nwere ọtụtụ otu na mmega ahụ ezubere iji zụlite ikike Telepathy ndị sonyere. Ndị otu a na - ahụ maka telepathy dị ka "ịmatakwu, na-enwewanye uche n'akụkụ ndị ọzọ… inwe ike ịghọta ihe mmetụta mmadụ na-enwe, na-agabiga, na-agwaghị ya banyere ya" (Bainbridge 1978: 198). Omume ọzọ yiri nke a bụ ntụgharị uche nke abalị nke mere n'abalị abụọ nke izu ụka. Ntụgharị uche na ọrụ a ga-elekwasị anya na echiche abụọ, otu na-adịghị mma na otu ziri ezi, na ezubere ime mkpebi nke esemokwu dị n'etiti ngọzi na ibu arọ maka ndị sonyere (Bainbridge 1978: 203).
Ọganihu bụ nzukọ kachasị dị ịrịba ama maka n'èzí ndị ozi, ndị mbido, na ndị na-eso ụzọ. Ndị a metụtara agụmakwụkwọ gbasara Usoro ahụ ma bụrụkwa ndị na-agwọ ọrịa. Nzukọ ndị ahụ were ihe dị ka awa atọ na obere ezumike n'etiti ma n'ozuzu ha mere na abalị Monday na Wednesday. Ihe omume weere akụkụ mbụ nke nzukọ ndị a na ọkara nke abụọ bụ maka ịmụ usoro mmụta okpukpe. A kpọrọ otu ihe omume ọzụzụ Ọzụzụ Mbum n'Usoro. Maka ndị otu a nọ ọdụ kpamkpam ma na-anabataghị anya ha na anya ha ogologo oge. Iji "gafee" ule a mmadụ ga-enwerịrị ike ileghara mbọ niile ọ na-eme anya (Bainbridge 1978: 203-06).
Usoro a jiri ihe eletrọnik nke ha kpọrọ P-Scope iji kpughee mmetụta na ebumnuche dị omimi. E wuru P-Scope dị ka E-Mita nke Scientologist, nke n'aka nke ya bụ ngwa na-ekpo ọkụ nke yiri igwe-nzaghachi na igwe nyocha. A na-eji P-Spepe eme ihe na nnọkọ nke metụtara onye na-agwọ ọrịa na otu ma ọ bụ karịa ndị ahịa. Onye na-agwọ ọrịa ahụ jụrụ ajụjụ nke onye ahịa ahụ ma dekọọ ọgụgụ igwe. A haziri ọgụgụ ndị a ka ọ bụrụ Goal Line ma si otú a nwee ike ịchọta ihe mgbaru ọsọ kachasị mkpa nke onye ahịa (Bainbridge 1978: 211-16).
E nwere ọtụtụ usoro ọgwụgwọ / nchọpụta yiri nke ahụ nke ndị otu nọ elu nke òtù nzuzo ahụ sonyere. Oge ndị a, dị ka nke ndị ọzọ so, e lekwasịrị anya n'ịzụlite telepathy nke onye ahụ ma na-ebute ihe mgbaru ọsọ na egwu dị egwu nke metụtara omume ha. William Sims Bainbridge na-atụ aro na iji nnọkọ ndị a maka ndị otu niile bụ ụzọ esi ewepụta njikwa maka ndị sonyere. Ọ na-ekwu na Ike Setan, “Ọtụtụ usoro ọgwụgwọ a manyere onye ahụ so mee ka ọ kwuo mmetụta ya niile ma kweta omume ya niile. Ndị na-agwọ onwe ha, ma ọ bụ ìgwè nke ndị ibe [Processeans], ga-ehulata onye ahụ n'ụzọ ọ chọrọ, na-achịkwa ya n'ụzọ aghụghọ ma n'ụzọ zuru oke "(Bainbridge 1978: 222).
A haziri ndị otu Usoro ahụ n'usoro ndị isi zuru oke. Ekwuru na ndị isi ọchịchị dabere na ọrụ na ọ bụghị mma, na ndị nọ n'elu adịghị mma kama ha rụrụ ọrụ ụfọdụ (Bainbridge 1978: 153). Bainbridge na-ekwu na "… sistemu a na-erigbu ma na-achịkwa ndị nọ n'etiti n'etiti site na ndokwa nke afọ ojuju na nkwa nke afọ ojuju ka ukwuu ga-abịa" (Bainbridge 1978: 142).
Ọrụ dị iche iche bụ: Acolyte, Initiate, Outside Messenger (OP), N'ime ozi (IP), Amụma, Oku, Nna-ukwu, na Omega. Ịkwaga site n'otu ọkwa gaa n'ọzọ, mmadụ nwere baptism. Acolytes bu ndi mmadu ndi natara uzo ozo n'inwe ndi otu ma o nweghi ihe di mkpa. Iji ghọọ Onye Mbụ, Acolytes gara ụfọdụ klas ma sonye ntụgharị uche na ibu ọnụ. Ndị mbido enweghị ọrụ ọ bụla a kapịrị ọnụ n'etiti ìgwè ahụ, ọ bụkwa naanị ụfọdụ ka a kpọpụtara ka ha bụrụ ndị ozi.
Usoro ịbụ onye ozi siri ike karịa ma sie ike. Agbanyeghị mgbe mmadụ mechara nweta ọkwa dị na mpụga, enyere ha aha dị nsọ, kwaga n'ime Flat Messenger ebe ha nọrọ ọnwa iri na abụọ wee bido inye onyinye. OP na-atụ anya na ọ ga-anọghị n'otu ọnwa iri na abụọ a. O doro anya otu mmadu si gafere na ọnọdụ ndị ọzọ dị elu mana onye ọ bụla na-esonyere ya na ibu ọrụ na ọrụ ka ukwuu n'ime ụka. Ọnụ ọgụgụ ndị rụzuru ọrụ ndị a dị elu pere mpe.
Naanị ọnọdụ nke e nyere kama ịbụ nke e nwetara bụ Omega. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ nanị Robert na Mary Anne na-egosipụta na ha bụ ndị guzobere na ndị ndú nke otu. Omega na - etinye onwe ya kpamkpam site n'aka ndị ọzọ niile wee chịa n'ebe dị anya.
Akwụkwọ nta nke otu ahụ kesara na 1972, "Faksị n Figgers," kwuru na ndị otu karịrị 100,000 na "Site na December 1971, na atụmatụ mgbanwe, ọnụ ọgụgụ [Processeans] guzo gburugburu akara 100,000, ma na-eto n'ike n'ike ”(Kwuru na Bainbridge 1978: 144). Bainbridge, onye gụrụ otu ahụ dị ka onye na-ekiri ihe na-ekiri ya, na-eme atụmatụ na ọnụ ọgụgụ dị na ọnụ ọgụgụ otu ahụ dị na 200 ruo 250 (Bainbridge 1978: 144). Ọ na-eche na ọnụ ọgụgụ nke 100,000 bụ atụmatụ nke ọnụ ọgụgụ ndị nyere aka na arịrịọ n'okporo ámá, ma ọ bụ na-etinye aka n'ụzọ ụfọdụ. Ebe ọ bụ na ịbụ onye otu gụnyere usoro nke usoro nnabata siri ike, ọ bụ ihe ekwesighi ekwenye ka ịkpọtụrụ ndị otu gị (Bainbridge 1978: 144).
Mgbe Usoro ahụ dị na mmalite ọ dọtara uche dị ukwuu. Ndị mmadụ kpọrọ ndị otu ekwensu na-efe ofufe n'ihi nkwenye ha kwenyere na Setan dịka chi. E boro ha ebubo, dị ka ọtụtụ okpukpe okpukpe ọhụrụ, nke itinye aka na ime ihe ike na omume rụrụ arụ na ịnwa iweta njedebe nke ụwa (Ozi gbasara ndị otu na-emegide òtù nzuzo). William Sims Bainbridge na-agbagha ebubo ndị a, na-ekwu na "enweghị ime ihe ike na enweghị mmekọ nwoke na nwanyị, mana achọtara m ọmarịcha ịma mma na ọgụgụ isi ọzọ na okpukpe ndị ọzọ" (Bainbridge 1991: 1).
Taa enwere otutu ndi di iche iche nke puru iche na ulo oru mbu nke ikpe ikpe ikpe. Ndị otu a nwere ụfọdụ nkwenye nke Usoro ahụ mana ha jikọtara ndị a na ezigbo echiche dị iche iche iji mepụta usoro mmụta nke ha. Otu n'ime ndị otu a bụ Society of the Processeans nke bụ nzukọ ime obodo ma yie ka ọ bụkarịrị ụwa. Otu ọzọ bụ ntọala okwukwe nke Chukwu. Otu a bụ nsonaazụ nke nnukwu schism nke Usoro ahụ ma Mary Anne duziri ya. O doro anya etu otu a siri sie ike taa. Onye ọzọ nọchiri Usoro ahụ nwere ike ịbụ Usoro Terran agbanyeghị, amachaghị ihe banyere otu a.
Bainbridge, Sims William. 1978. Ike Setan. Berkley, CA: Mahadum California Press.
Bainbridge, Sims William. 1997. "Usoro nke ụka nke ikpe ikpeazụ." Pp 241-66 na The Sociology of Movements Religion, edeziri site na William Sims Bainbridge. New York: Routledge.
Bainbridge, Sims William. 1991. "Usoro Setan." Pp. 297-310 na Okpukpe Setan, nke James T. Richardson dere, Joel Best, na David G. Bromley. New York: Aldine de Gruyter.
Melton, Gordon J. 1996. ”Usoro Nzukọ nke Ikpe Ikpeazụ.” Pp. 229-30 n'ime Akwụkwọ bụ Encyclopedia of American Religions, edeziri ya site J. Gordon Melton. Detroit: Gale Research Co.